anivon’ny fandrindrana izany dia masina eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika. Nahomby ! Izay no teny nafonja nentin’izy ireo namaritra ny lafiny fandriampahalemana. Nilamina ny fahatongavan’ireo mpizaika isaky ny Diosezy na nisy aza ny indro kely toy ny lozam-pifamoivoizana naharatrana olona 3 tao Ambanja. Afaka namonjy ny fotoan-dehibe teto Antananarivo ihany moa ireo olona ireo. Mikasika ny resaka fitoriana momba ireo varotra sakafo teny an-toerana moa dia nilaza ny avy eo anivon’ny fandrindrana eo anivon’ny repoblika fa ny mpitory mihitsy no efa nilaza fa tsy misy idiran’ny fiadidiana ny repoblika ny zava-nitranga kanefa na izany aza dia hisy ihany ny fanadihadiana hotanterahan’izy ireo hamantarana ny tena zava-nisy marina.